Wilaayada islaamiga Banaadir oo Raashin iyo Bagaash dhacay ku gubtay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada). | Halganka Online
Wilaayada islaamiga Banaadir oo Raashin iyo Bagaash dhacay ku gubtay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada).
Posted on Abriil 14, 2010 by halganka
Wilaayada Islaamiga Gobalka Banaadir ayaa maanta soo bandhitay waxyaabo dhacay oo si sharci dara ah ay ganacsato ugu Iibinayeen suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho.
Munaasabad lagusoo bandhihayay Raashin iyo Bagaash dhacay ayaa maanta lagu qabtay fagaara ku yaal degmada Kaaraan magaalada Muqdisho waxaana halkaasi ku sugnaa saxaafadda magaalada Muqdisho iyo shacabka ku nool degmada Kaaraan.
Waaliga Wilaayada islaamiga Gobalka Banaadir Sheekh Cali Maxamed Xuseen Abuu Jabal oo saxaafadda kula hadlayay degmada kaaraan ayaa sheegay in ciidamada Xisbada wilaayada ay howlgallo ka sameeyeen suuqyada magaalada kadibna ay soo heleen Raashin iyo waxyaabo kale oo waqtigoodu dhacay.
Sheekh Cali Jabal wuxuu ku nuux nuuxsaday in ay gubi doonaan waxyaabaha dhacay ee lagusoo qabto suuqyada magaalada Muqdisho isagoona ganacsatada Muslimiinta ah ujeediyay baaq ah in ay alle ka baqaan oo ay umadda ka daayaan waxyaabaha dhacay oo ay ku khaldayaan.
waxyaabihii maanta lasoo bandhigay waxaa kamid ahaa Raashin Uray oo ay ganacsato damiir laawayaal ah shacabka ku qaldayeen waxyaabihii maanta lagubay waxaa kamid ahaa Bur, kareemooyin,Dawo,Qaxwo, Cabitaano iyo waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan oo Date-koodu dhacay waqti hore.
Wilaayada Islaamiga banaad waxay uqabatay ganacsatada in ay muddo 3 Maalmood ah kusoo wareejiyaan waxyaaba dhacay ee weli suuqyada yaal hadii kale ay Ciidanka Xisbada ay xoog ku geli doonaan goobaha ganacsiga ee raashinka dhacay lagu Iibiyo.
« Saraakiil katirsan Ciidamaa Gaalada AMISOM oo lagu laayay Qaraxyo Barakaysan oo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Shabaabul Mujaahidiin oo faah faahisay weeraradaasi Barakaysan. Ciidamada Xisbada Wilaayada islaamiga Sh/Dhexe oo saaka Howlgal burcad sifayn ah ka sameeyay tuulooyin hoos yimaad degmad Ruun nirgood. »